Beesha Jareerweyne oo ka soo horjeesatay in lagula tartamo Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Beesha Jareerweyne oo ka soo horjeesatay in lagula tartamo Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle
Doorashada guddoonka baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa dib u dhac ku yimid, kadib markii xildhibaanada ka soo jeeda beesha Jareerweyne ay isaga baxeen.
Xildhibaanadan ayaa diiday inay ka qeybgalaan tartanka doorashada Guddoonka baarlamaanka, kadib markii qaar ka mid ah siyaasiyiinta beelaha jareerweyne ay ku doodeen in aan lagula tartami karin xilka Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo ay iyagu xaq u leeyihiin.
Arrintan ayaa qasabtay in Guddoomiyaha baarlamaanka Federalka Soomaliya Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari inuu dadaal u galo sidii uu ku qancin lahaa xildhibaanada beesha Jareerweyne, waxaana hada socda kulamo uu la leeyahay.
Xilka guddoomiyaha baarlamaanka ayaa isu soo sharaxay saddex xildhibaan oo mid ka mid ah uu ka soo jeedo beesha Jareerweyne halka labada xildhibaan ee kale ay yihiin xildhibaano beesha Gaaljecel u dhashay.
Wasiirka Kalluumeysiga dowlada federalka Maxamed Cabdi Ceymoy ayaa ka mid ah siyaasiyiinta sida xoogan ugaga soo horjeeda in lagula tartamo beesha Jareerweyne guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle.
Warar ayaa sheegayay in wasaarada arrimaha gudaha iyo wakiiladii ka socday IGAD ay hore ugala hadleen duubabka dhaqanka sidii loo qeybsan lahaa xilalka sarsare ee maamulka Hirshabeelle. Waxaana wararka qaar ay sheegayaan in beesha Gaaljecel iyo beesha Jareerweyne loo ballanqaaday in ay yeelanayaan xubinta guddoomiyaha baarlamaanka.
Hase yeeshee markii maanta la doonayay in la galo hoolka shirarka magaalada Jowhar ayaa waxaa xildhibaanada Jareerweyne ay diideen in ay galaan iyagoo ku hanjabay inay qaadacayaan kasii mid ahaanshaha maamulka haddan la fulin ballantii hore loogaga qaaday.
Waxaa socda daadaalo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka cusub ee hareeyay baarlamaanka cusub ee Hirshabeelle iyadoo wadahadalo lagu qaboojinayo xiisadan ay ka socoto magaalada Jowhar.